“Waxaa jira dad doonaya in Messi ay ku qasbaan ka tagista Barcelona” – Joan Laporta – Gool FM
“Waxaa jira dad doonaya in Messi ay ku qasbaan ka tagista Barcelona” – Joan Laporta
(Barcelona) 24 Luulyo 2016 Madaxwaynihii hore ee Barcelona Joan Laporta ayaa eedeeyay maamulka haatan ee kooxda reer Spain kaas oo uu ku dhaleeceeyay inuu gacan ka gaysanayo sidii Messi uu uga tagi lahaa kooxda.
Joan Laporta ayaa sheegay in Messi uu lacago badan ku bixiyo canshuurta dalka Spain balse maamulka Barcelona ee uu hogaamiyo Bartomeu ayuu ku eedeeyay inuu ka gaabiyay garab istaaga laacibka reer Argentina.
“Waxaa jirta awood gooni ah oo ka tirsan Barcelona isla markaana doonaysa in Messi uu katago kooxda, waan ixtiraamayaa go’aanka maxkamada, laakiin waxaan ka ogahay Messi ayaa ah inuu lacago badan ku bixiyo dawlada Spain” ayuu yiri Joan Laporta oo la hadlay Radio Catalunya.
“Barcelona way igala wayntahay koox, sharaf wayn ayeey ii ahayd inaan madaxwayne ka noqdo, xiligii aan madaxwaynaha ahaa waxaan kordhiyay shacbiyada kooxda iyo in taageerayaashu ay ku xirnaadaan kooxda, laakiin arinkaas haatan waa mid aysan kooxdu lahayn”.
Joan Laporta ayaa wax laga xishoodu ku tilmaamay qaabkii Barcelona ay ulasoo wareegtay Neymar wuxuuna intaa ku daray in arimaha nuucaas ah ay hoos u dhigayaan sharafta kooxda.
CODEEYN: Gobolkee ugu cod badnaaday gobolladii iskugusoo baxay nus-dhamaadka tartanka maamullada? (Natiijadii codaynta?)